Madaxweynaha Somaliland oo tallaabo Micno-darro ah ku tilmaamay Isku-dayga Soomaaliya kaga hortagaysay Maalgeshiga Dekedda Berbera | Somaliland Post
Home News Madaxweynaha Somaliland oo tallaabo Micno-darro ah ku tilmaamay Isku-dayga Soomaaliya kaga hortagaysay...
Madaxweynaha Somaliland oo tallaabo Micno-darro ah ku tilmaamay Isku-dayga Soomaaliya kaga hortagaysay Maalgeshiga Dekedda Berbera
“Waxaanu heshiiska maalgeshiga Berbera la saxeexannay shirkadda DP World iyo Imaraadka Carabta annaga oo metelayna Qaran madax-bannaan, waxaana hirgelin doonta dowladdayada.” – MUUSE BIIXI CABDI
“Somaliland waxay u baahan tahay maaliyadda iyo waayo-aragnimada DP World, dowladda Ethiopia waxay u baahan tahay marin kale oo ganacsigeedu u heellan yahay.” – DR SACAD CALI SHIRE
Dubai (SLpost)- Madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi, ayaa tallaabo aan micno buuran ku fadhiyin oo aan wax saamayn ah ku yeelan karin danaha dalka ku tilmaamay hadal ka soo yeedhay baarlamaanka Soomaaliya oo shaaciyey oo ansixiyey mooshin ay sheegeen inay ku horjoogsanayaan maalgeshiga Dekedda Berbera.
Madaxweyne Muuse Biixi oo Jimcaha maanta shir-jaraa’id oo ay warbaahin caalami ahi goob-joog ka ahayd ku qabtay magaalada Dubia kaddib kulan Qado-sharaf ah oo Maamulaha Guud ee Shirkadda DP World u sameeyey Weftiga, waxa uu sheegay inaanay Soomaaliya lahayn Awood ay Wax ku yeeli karto danaha Somaliland.
“Waxaan ku tilmaami karaa hadal micno-darro ah, xaqna uma haystaan inay si uun u soo faro-geliyaan sida aanu u maaraynayno Dekedda Berbera,” Sidaas ayuu yidhi Madaxweyne Muuse Biixi oo hadal ka jeediyey shir-jaraa’id oo uu ku wehelinayey Wasiirka Arrimaha Dibadda Dr Sacad Cali Shire kaddib kulanka qado-sharafta ah ee Maamulaha DP World u sameeyey.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii watay waxa uu intaas ku darya, “Waxaanu heshiiska maalgeshiga Berbera la saxeexannay shirkadda DP World iyo Imaraadka Carabta annaga oo metelayna Qaran madax-bannaan, waxaana hirgelin doonta dowladdayada. Waxaanu idiin xaqiijinaynaa inaanay Soomaliya ku yeelan karin wax saamayn ah oo taban,” ayuu yidhi Md Muuse Biixi Cabdi Sida ay shabakadda Somalilandpost.net ka soo xigatay jariiradda Gulfnews oo ka mid warbaahinta ku sugnayd goobta uu madaxweynuhu shirka jar’aaid ku qabtay maanta oo Jimce.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Somaliland Dr Sacad Cali Shire oo isaguna halkaas ka hadlay, ayaa nasiib-darro ku tilmaamay in baarlamaanka Soomaaliya wakhtiga isaga lumiyaan inay horjoogsadaan heshiiska DP World ee Dekedda Berbera oo uu ku tilmaamay horumar faa’ido u leh gobolka oo Soomaaliya ku jirto..
“Maalgeshiga DP World ee Dekedda Berbera waa barnaamij horumarineed oo aan dan u ahayn Somaliland oo kaliya balse faa’iido u leh gobolka oo dhan. Somaliland waxay u baahan tahay maaliyadda iyo waayo-aragnimada DP World, dowladda Ethiopia waxay u baahan tahay marin kale oo ganacsigeedu u heellan yahay,” Sida ayuu yidhi Dr Sacad Cali Shire, isagoo intaas ku daray inaanay dowlad ahaan ka filayn Soomaaliya tallaabada ay kaga hortagayeen maalgeshiga dibadeed ee laga hirgelinayo Somaliland.